Apex Launcher အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（22.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Apex Launcher - Customize,Secure,and Efficient
pe Apex Launcher၊ အသုံးပြုသူ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အထက်ရွေးချယ်မှု။
Apex Launcher ယူဆောင်လာသည် -
★ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း - သင့်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးရန်အခမဲ့အိုင်ကွန်အထုပ်များနှင့်အခင်းအကျင်းများ။ သင့်ရဲ့စတိုင်ကျတဲ့ launcher ကိုပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်စတိုင်သုံး 3D ကူးပြောင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
★ App Lock - လုံခြုံပြီးကာကွယ်ခြင်း - သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဖျောက်ထားပါ။
- သင်၏အလုပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အမြန်ရှာဖွေခြင်း၊ အမူအယာများ၊ အရန်ကူးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ယူခြင်း!
🔐 AppLock - သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုပုံစံနှင့်ကာကွယ်ခြင်း စကားဝှက်။ (လက်ဗွေအက်ပလီကေးရှင်းသော့ခတ်နေပြီ!) 🔐
pAppLock သည် Facebook၊ Whatsapp၊ ပြခန်း၊ Messenger၊ Snapchat၊ Instagram၊ SMS၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ဂျီမေးလ်၊ ဆက်တင်များ၊ သင်ရွေးချယ်။ AppLock သည်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖုံးကွယ်နိုင်သည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးပြီး privacy ကိုကာကွယ်ပါ။ လုံခြုံရေးကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
your သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုလှည့်ပတ်သွားလာနေသူတစ်စုံတစ် ဦး အားစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ယခု Apex Launcher သည်ပုံစံသို့မဟုတ် pin စကားဝှက်ဖြင့် AppLock ကာကွယ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ လက်ဗွေ AppLock သည်မကြာမီရောက်လာလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ညှိနှိုင်းနေပါ။
your သင့်ကိုယ်ပိုင် app lock mode အပြင်သော့ချိန်ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ AppLock သည်သင်၏ privacy ကိုနေရာတိုင်းတွင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
🏠 ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် themes များနှင့် Icon Pack Center
စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော home screen နှင့် app drawer grid size ။ ဖြတ်လမ်းများနှင့်ဖိုင်တွဲများအတွက်စိတ်ကြိုက် icon များ၊ အခင်းအကျင်းများနှင့်တံဆိပ်များ
စာမျက်နှာတစ်ခုတွင် icon ၁၀ ခုနှင့်စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာအထိ Scrollable dock ကို
အဆုံးမဲ့ & elastic scrolling (အိမ်မျက်နှာပြင်၊ အံဆွဲနှင့်အထိုင်)
ဖန်စီကူးပြောင်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (တက်ဘလက်၊ cube) , etc)
ဒြပ်စင်များကိုသင်အလိုရှိသည်အတိုင်းဖျောက်ထားပါ (status bar, dock, etc)
အံဆွဲအက်ပ်များခွဲခြင်း (ခေါင်းစဉ်၊ တပ်ဆင်သည့်ရက်စွဲ၊ အများအားဖြင့်အသုံးပြုသော)
မတော်တဆပြောင်းလဲမှုများကိုကာကွယ်ရန်သင်၏ desktop ကိုသော့ခတ်ပါ။
အဆင်ပြေသောအိမ်မျက်နှာပြင်အမူအယာများ (pinch၊ အပေါ် / အောက်သို့ပွတ်ဆွဲပါ၊ နှစ်ချက်နှိပ်ပါ)
အဆင့်မြင့်ဆောင်အင်ဂျင် ( icon packs, skins စသဖြင့်)
အရန်ကူးခြင်း / ပြန်လည်တင်ခြင်းချိန်ညှိချက်များနှင့်အချက်အလက်များ
နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကောင်းဆုံး ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ
(Paid Version) အင်္ဂါရပ်များ:
🔥အားကောင်းတဲ့အံဆွဲခွင်အထူးပြုများ (အမျိုးအစား) အံဆွဲထဲရှိအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ အံဆွဲထဲမှာဖိုလ်ဒါများ)
count ရေတွက်။ အသိပေးချက်များကိုမဖတ်ရသေး (
မှအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားသည်) Apex Notifier
🔥လွယ်ကူသောသင်္ကေတအမူအယာများ (အပေါ်နှင့်အောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုပွတ်ဆွဲ) ။ 🔥အမူအရာရွေးစရာများ (လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းအမူအရာ)
🔥နောက်ထပ်အကူးအပြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (အကော်ဒီယန်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်စသည်ဖြင့်)
folder ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖိုလ်ဒါထောက်ပံ့မှု (အမြောက်အများထည့်ပေါင်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းဖိုင်တွဲများ)
🔥အဆင့်မြင့်ဝစ်ဂျက်ရွေးစရာများ (အထိုင်ရှိဝစ်ဂျက်များ၊ ထပ်နေသည့်ဝစ်ဂျက်များ)
•စာနယ်ဇင်းတစ်ခုကို Long ခလုတ် နှိပ်၍ ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်အခြားအိုင်ကွန်ပေါ်သို့ဆွဲယူပါ။
Desktop ပေါ်ရှိအိုင်ကွန်များ / ဖိုလ်ဒါများကိုကြာရှည် နှိပ်၍ icon များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် popup menu မှ edit ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဓာတ်ခွဲခန်း
•အခြားအက်ပ်များမှ (ဥပမာ Chrome) မှအိုင်ကွန်ဖြတ်လမ်းများကိုဖန်တီးရန် Apex Launcher ကိုမူလအိမ်မျက်နှာပြင်အက်ပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါ။
ဤအက်ပ်သည်ဖန်သားပြင်ပိတ် / ပိတ်သောလုပ်ဆောင်မှုအတွက် Device Administrator ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်။
မတ်ေတာ Apex Launcher 💕? Google Play တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပါ။ Apex Launcher ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေသည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် us မျှဝေပါ။
apex launcher Setup . Customize you android phone... 2021⚡⚡
Apex launcher theme and settings
Apex launcher setting
Nova and Apex launcher review
Pastel Streets - Android Homescreen Tutorial
Apex Launcher - Customize,Secure,and Efficient 4.9.17
Sett Linn Nge